Iwo makumi matatu Akanyanya Kubhadhara Mabasa eGraduate muAmerica 30 Kwidziridzo: Yazvino Chikoro Nhau
Iwo makumi matatu Akanyanya Kubhadhara Mabasa kune Vakapedza kudzidza muAmerica 30 Kwidziridzo
Akaiswa mukati dzidzo by Edhiyo Vashandi musi waJune 18, 2021
Pazasi pane runyorwa rwemabasa akanyanya kubhadhara kune Vakapedza kudzidza muAmerica. Sekureva kweshumo ichangoburwa naGlassdoor.com, vanachiremba nemagweta nzvimbo unit vachiri vepamusoro-nyika vanowana mari. Tichitarisa neizvi, mabasa ekurapa nemutemo zvinoita kunge ane mari yakawanda. Tsvaga ruzivo pazasi.
Kuti inyorwe rondedzero yayo Yakanakisisa Kubhadhara Mabasa eGraduate muAmerica muna 2021, webhusaiti iyi yakaongorora isingazivikanwe data remubhadharo kubva kune vashandisi vayo.
Kuti chinzvimbo chebasa chive pane rondedzero, paifanirwa kunge paine mashoma makumi manomwe neshanu mishumo pabasa rakatumirwa mugore rapfuura. C-chikamu chemabasa chakabviswa kubva mushumo.
Akanyanya Kubhadhara Mabasa eChikoro
Heano makumi matatu mabasa akanyanya kubhadhara, zvichibva pakanyorwa ne Glassdoor.com:
Ndokumbira utarise kuti iyo mihoro ndiyo mavhareji pagore.
Mari yemubhadharo: $ 180,000
Kutanga pane yedu runyorwa rwemabasa anobhadhara zvakanyanya kune vanopedza kudzidza. Mushonga harisi iro chete basa rinobhadhara zvakanyanya mukati meUS, kutora uye kudiwa kwevanachiremba ekurapa vanofungidzirwa kuvandudza pa14% kubva 2014 kusvika 2024.
Izvi zvakapetwa zvakapetwa zvakapetwa zvakaenzanisirwa pamabasa ese, sezvakataurwa Bureau yeVashandi Statistics.
Mari yemubhadharo: $ 144,500
Chechipiri, pane runyorwa rwedu rwemabasa anobhadhara zvakanyanya kune vakapedza kudzidza Kunyange hazvo mibairo ichizosiyana zvinoenderana nebazi remutemo iwe unonyanya. Muvhareji wemubhadharo wakakosha zvakakwana kuita mutemo wechipiri unobhadhara basa muAmerica. Kunyanya zvakadaro, Glassdoor's basa rondedzero peji inoratidza nezve 9,000 kuvhurwa kwe basa iri.
3. R ​​& D Mnager
Mari yemubhadharo: $ 142,120
Vanotsvagisa nekusimudzira mamaneja vane kupararira kwemabasa anovimba nemutungamiri, kubva kumusoro chigadzirwa chigadzirwa uye kutungamira kudyidzana kutsva kutarisira vashandi.
Mari yemubhadharo: $ 132,000.
Iyi zvirokwazvo iri rimwe remabasa akanyanya kubhadhara kune vakapedza kudzidza. A Computer chirongwa chekuvandudza maneja inovandudza uye inotarisira iyo komputa programming system. Tarisiro yebasa iri yakajeka; inofungidzirwa kukura kubva muna 2014 kusvika muna 2024.
5. Maneja weFarmacy
Mari yemubhadharo: $ 130,000
Makore ehunyanzvi kuwedzera kune iyo Ph.D inonyanya kudikanwa. Varapi vemishonga vanotarisirwa kutora izvi.
Iyi ndeimwe yemabasa ari kukura anobhadhara zvakanyanya kune vakapedza kudzidza. Maseti mamaneja anowanzo tarisa zvirongwa zvekambani kuvandudza kudyidzana, kutyaira kukura uye kuvhura mitsva mitsva-yekutyaira. Dhigirii rinodiwa, uye vashandirwi vashoma vanodawo tenzi, zvinyorwa zveGlassdoor zvakaratidza.
7. Conputer Chirongwa Mugadziri
Mari yemubhadharo: $ 128,250
Computer program vagadziri vanogadzira zvirongwa uye vanotaurirana ehunyanzvi zvirongwa kune vatungamiriri vekambani. A bachelor of science degree inombodiwa.
8. Computer Circuit Dhizaini Injiniya
Mari yemubhadharo: $ 127,500
Makomputa wedunhu dhizaini mainjiniya anopa emagetsi dhizaini uye kusimudzira rutsigiro uye kugadzirisa technical technical nyaya. Kuva neB.Sc. kana M.Sc muMagetsi Injiniya yakajairika.
9. Ruzivo Technology Technology Manager
Mari yemubhadharo: $ 120,000
Ruzivo rwehunyanzvi mamaneja anozivisa kuti yega yega yekambani yekushandisa, komputa mapurogiramu, uye network zvinoshanda zvinoshambira uye kuti vanoita zvinangwa zveIT zvesangano. Vatariri veIT dzimwe nguva vane degree mukati memunda rakawedzerwa kune akawanda hunyanzvi hunyanzvi.
10. Solution Dhizaini
Mhinduro dzemagadzirirwo anotungamira kana kufambisa magadzirirwo ezvigadzirwa uye zviitiko. Nekudaro, ivo vanonyanya kunetsekana nehunyanzvi chimiro chekuzviita. Zvinodikanwa zvedzidzo zvinosiyana, kutanga kubva padanho muComputer Science kana IT masisitimu kune tenzi mukushambadzira kana mainjiniya.
11. Engagement maneja
Ivo vane mhosva kune hukama hwevatengi. Basa rinoda hunyanzvi mukutengesa uye manejimendi manejimendi. kuronga kana hunyanzvi hwehunyanzvi kunogona kubatsira.
12. Zvishandiso Developer Manager
Aya mamaneja anotungamira uye nekuvandudza masisitimu emukati uye kodhi yekombuta. Dhigirii uye akati wandei mamwe makore ehunyanzvi mukati memunda anodikanwa.
Mari yemubhadharo: $ 118,000
Vanachiremba vanowana mihoro yakanaka. Nekudaro, ivo vanozove nemaawa akareba uye vanotarisirwa kuti vashande masvondo ekuchinja. Kuva nedhigirii rekurapa kunodiwa.
14. Mugadziri weSystem
Mari yemubhadharo: $ 116,920
Vagadziri ava vanovaka nekuchengetedza dhatabhesi rekambani, kunyorera zvirongwa, uye zvirongwa. A bachelor's kana degree redzidzo muinjiniya, sainzi yakashandiswa, kana munda wakabatana unodiwa.
15. Maneja Wemari
Mari yemubhadharo: $ 115,000
Ivo vanowanzove ne5 kana yakawanda makore emakore ehunyanzvi mune zvemari, accounting, kana munda wakabatana, kuwedzera kune iyo degree.
16. Muongorori weData
Komputa uye ruzivo rwekuongorora masayendisiti anogadzirisa epamberi nyaya mukomputa. Basa rebasa iri rinofungidzirwa kuwedzera gumi nerimwe kubva muzana kubva muna 2014 kusvika muna 2024, izvo zvinokurumidza kupfuura zvakajairwa.
Mamaneja enjodzi anorwira neinishuwarenzi, mutoro, uye kutevedzera zviri pamutemo. Iwo mashandiro ebasa uye zvinodikanwa zvedzidzo zvinosiyana zvakanyanya, kubheja pabhizinesi.
18. Murongi wekugadzira
Vakuru vekutonga vanoita zvirongwa zvitsva zvekutengesa zvesangano, zvichitungamira mukuzvidzwa uye maitiro. izvo zvinodiwa nebasa zvinosiyana, zvisinei memoir muhutungamiriri inobatsira.
Wepamusoro 17 Makambani Ehungwaru muUnited of America
Zvinotarisirwa kuChikoro Chemucheche Kudzidziswa Certification
Maitiro Ekutanga Mini Mini Real Estate Bhizinesi muNigeria neRisense
Zvikonzero nei Vadzidzi Vachifanirwa Kuwana iyo Degree kuInternet Educational Institution
30 Nzira Dzakasarudzika dzekuita Mari muSouth Africa 2018
Actuaries ongorora njodzi yemari uye kusava nechokwadi. Employment yeactuaries inotarisirwa kukura thumping gumi nesere pc kubva 2014 kusvika 2024, iyo BLS inoti.
20. Murongi Weruzivo
Mari yemubhadharo: $ 113,000
Dhizaina dhizaini inogadzira info uye tekinoroji mamepu esangano. Chinzvimbo chinowanzoda hunyanzvi hwehunyanzvi uye / kana BS mune yakashandiswa sainzi kana info masisitimu.
21. Mutariri Mutero
Mari yemubhadharo: $ 110,000
Vateresi vemitero vanogadzirira federal nehurumende mutero unodzosera vanhu nemabhizinesi. Shamwaridzana mu Nursing koreji murume kana akapedza degree mu accounting anodiwa.
22. Chigadzirwa Manager
Mari yemubhadharo: $ 107,000
Aya mamaneja akakosha kusangano rekugadzira zvigadzirwa zvesangano, zvinoshanda kuve nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvitsva zvinowanikwa nenguva. Kune zvinopfuura zviuru zvinomwe zvemabasa zvinopihwa zveichi chinzvimbo.
Mari yemubhadharo: $ 106,500
Dhizaini mamaneja nharaunda unit inozvidavirira yemafungiro emifananidzo uye chirango chikuru kune mutengi kana hunyanzvi hwevatengi nesangano. Iwo mabasa anosiyana zvakanyanya kumaindasitiri.
24. Maneja we Analytics
Mari yemubhadharo: $ 106,000
Iri basa rinoda ruzivo muhuwandu uye ruzivo rwekuongorora. Iyi chinzvimbo ine zviuru zvemabasa ekuvhura.
Iri basa rakakura maererano nemabasa. Infosystems mamaneja anotarisa ruzivo rwechero mhando mune iyo firm.
26. Nyanzvi dzezvepfungwa
Mari yemubhadharo: $ 95,710
Inofungidzirwa kukura ne9 muzana.
27. Ongororo Yekuchengetedza Dhata
Mari yemubhadharo: $ 92,600
Kuchengeteka kwakanyanya kudikanwa kupfuura nakare kose. Iyo inofungidzirwa kukura kwehuwandu hwegumi muzana.
28. Mupi wezano wezvemari
Mari yemubhadharo: $ 90,530
29. Kuvaka maneja
Mari yemubhadharo: $ 89,300
30. Chiremba wemhuka
Mari yemubhadharo: $ 88,770
Chii chako kutora pane izvi? Tinotenda kuti chinyorwa ichi chakabatsira, kana hongu, usazeze kugovana ruzivo urwu neshamwari dzako paFacebook, Twitter, Whatsapp, neGoogle plus.
Yepamusoro Kubhadhara Mabasa muNigeria 2021 Ona Zvazvino Zvidzoreso
Yepamusoro Kubhadhara Mabasa muAmerica kune Vakapedza kudzidza muna 2021
Iwo makumi mashanu Akanaka-Kubhadhara Mabasa ane Chete Bachelor's Degree mu50
Kuongorora kwekuziva uye kushandiswa kweRusununguko rweRuzivo Mutemo, 2011, ne Broadcast Vanyori venhau 'muKogi State
National Frequency Management Council Kutora 2021/2022 Fomu Rekunyorera
Nyorera Izvozvi kune EGINA Jobho Zororo reiyo UFR Kuisa Injiniya
Nyorera Chase Bank Mudzidzi Zvikwereti 2021
Tags: mabasa anobhadhara zvakanyanya pasirese 2021, mabasa anobhadhara zvakanyanya muUSA 2021, anonyanya kubhadhara mabasa asina degree, mabasa anobhadhara zvakanyanya pasirese 2020, pamusoro zana kubhadharira mabasa
Trackback URL | Mhinduro RSS Feed
July 27, 2018 pana 10: 04 pm
Zvinoita sekunge ichi chinyorwa chakagadzirirwa ini
« Nigerian Best Airlines Bata Informations - Dzimba uye Dzenyika Dzepasi Pose
Dambudziko Solution Essay, Ona Nhanho Nhanho Gwara uye Muenzaniso »